Doorasho deg deg ah oo looga dhawaaqay Falastiin – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia - Idman news
Doorasho deg deg ah oo looga dhawaaqay Falastiin – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Muqdisho-KNN-Dhinacyada Falastiiniyiinta ayaa isku raacay in Dalka Falastiin ay Doorashooyiinka Guud ay ka dhacaan Lixda Bilood ee Fooda nagu soo haaya sida ay sheegeyaan wararka ka imaaneya Janhuuriyada Falastiin.
Waklaalada wararka Falastiin ayaa laga soo xigtey in Hamas iyo Fatah ay isku raaceen in Doorashooyiinka Dalkaasi laqabto Xeli ay jiraan Muran weyn oo u dhexeeya Dalalka Jaamacada Carabta iyo Falastiin.
Dhinaca Kale Afhyeen u hadley Ururka Xamaas oo layiraahdo Fowsi Barhoum ayaa warbaahinta u sheegey in madaxda Reer Falastiin Kulan ay yee sheen kadib ay soo saareen in Doorashooyiinka si wadajir ah loo galo iyaga oo meel iska dhigeya wixii Khilaafaad ahaa ee u dhxeeyey.
Wararka qaar ayaa waxaa ay tibaaxayaan in Dowladda Turkiga ay Gadaal ka riixeyso Nabadeynta Kooxaxa Falastiiniyiinta kadib markii dhawaan wufuud Xamaas iyo Fatah ka socda ay gaareen Caasimadda Dalka Turkiga ee Ankara.
Sida oo kale Jibril Rajoub oo ah Afhyeen u hadley Fataah ayaa waxaa uu, u sheegey Muuqaal baahiya Reer Falastiin in dhamaan dhinacyada ay dhawaan ku kulmi donaan magaalada Ramalah iyada oo ugu dambeyntiina halkaasi lagaga dhawaaqi dono Doorashooyiinka.
Previous Madaxweynaha cusub ee Mali oo la dhaarinayo maanta – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Next Maxaa looga hadlay kulankii Mursal iyo Axmed Madoobe?